M/weynihii hore ee Puntland Gen Cade Muuse oo lagu soo dhoweeyey magaalada Boosaaso – Radio Daljir
M/weynihii hore ee Puntland Gen Cade Muuse oo lagu soo dhoweeyey magaalada Boosaaso
Juunyo 19, 2013 5:58 b 0
Boosaaso, June 19,2013, M/weynihii hore ee Puntland Gen. Cadde Muuse Xirsi ayaa maanta si diirran loogu soo dhaweeyey magaalada Bossaso ee xarunta gobolka Bari, kaddib markii uu saaka ka soo kicitimay dalka isku-tagga immaaraadka carabta oo uu ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey.
Soo dhaweynta Cadde Muuse waxaa ka qaybgalay dadweyne badan oo lulayey calanka Puntland iyo caleemo qoyan, kuwaasi oo ku dhawaaqayey hal-ku-dhigyo ay ku maamuusayeen soo dhaweyntiisa.
Gen. Cadde, wax hadal ah ma siin warbaahinta, waxaana loo sii galbiyey hooygii dejintiisa loogu talo galay.
M/weyne Cadde ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku hawlanaa barnaamij lagu magacaabo bad-baadinta Puntland, kaasoo ku saabsan dhinaca siyaasadda iyo qaabkii loo wajihi lahaa doorashooyinka soo aaddan.
War-qoraal ah oo uu dhawaan soo saaray Cadde Muuse, ayaa muujinayey qabashada shir Issimada Puntland ka qaybgalaan oo dabayaaqada bishaan June ka dhaca Qardho, loogana taliyo aayaha Puntland, inkastoo warkaasi dawladdu ku tilmaantay mid wax dumin xambaarsan.
Xudnaha gudiga dabagalka Doorashooyinka Puntland oo la magacaabay (Dhegaysi+Sawiro)
Garoowe: Wasaaradda Haweenka & culimadda diinta oo iska kaashanaya joojinta tacadiyada haweenka (Dhegayso)